Fanirisoa Ernaivo : Naato tsy ho mpitsara -
AccueilSongandinaFanirisoa Ernaivo : Naato tsy ho mpitsara
Fanirisoa Ernaivo : Naato tsy ho mpitsara
02/11/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy nahazo rariny fa niraraka ompana ny fanambarana avy amin’ny sendikan’ny Mpitsara sy ny minisiteran’ny Fitsarana, taorian’ny teny an’avona sy feno fihantsiana nataon’ny kandidà Fanirisoa Ernaivo. Voalohany dia samy nanameloka ny nambaran’ity kandidà ity, na ny minisiteran’ny Fitsarana, na ihany koa ny sendikan’ny Mpitsara. Sahy nilaza mihitsy ny sendikan’ny Mpitsara, fa handray ny fepetra rehetra mikasika ny teny naloakin’ny vavan’ny kandida Fanirisoa Ernaivo. Miombona alahelo amin’ny havan’ireo mpitandro filaminana avy amin’ny polisim-pirenena, izay namoy ny ainy ihany koa ny Mpitsara rehetra tsy an-kanavaka. Voalazan’ny Fitsarana iray manontolo ihany koa, fa fanitsakitsahana ny lalàna misy eto Madagasikara ny fihetsika sy vava nataon’i Fanirisoa Ernaivo ka tsy azo ekena. Raha samy nilaza fa handray fepetra anefa ny Fitsarana sy ny sendikan’ny Mpitsara, dia mbola tsy nisy mazava ny fandraisana fanapahan-kevitra avy amin’ireo tompon’andraikitra ireo.
Ankilany anefa, nahatsapa tena ihany ny kandidà Fanirisoa Ernaivo, ary nanao fialan-tsiny ampahibemaso. Nambarany tamin’izany fa miala tsiny ny tenany, ary miara-miondrika amin’ny havan’ny maty. Raha fintinina ny fialan-tsinin’ity kandidà ity, dia tahaka ny hoe vava tsy ambiny no nisy anton’ireny zava-nitranga ireny. Nanentana ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny tenany, mba handray andraikitra araka ny tokony ho izy na dia eo aza ny baiko midina. Hatreto izany dia mazava, fa ny Fitsarana no manao ny mafana sy mangatsiaka eto amin’ny firenena. Azo inoana aloha fa efa tsy natokisan’ny vahoaka ny Fitsarana, ary tsy hatokisan’ny vahoaka mihitsy. Mbola lavitr’ezaka noho izany ny lalana ho diavin’ny Fitsarana, satria dia mazava tamin’ny tenin’i Fanirisoa Ernaivo, fa ny Mpitsara mahazo milaza izay tiany holazaina sy hotenenina. Manameloka kosa ny Fitsarana fa tsy afaka manasazy, ny vahoaka ankilany mitazana, saingy tokana ihany ny fanehoan-kevitry ny vahoaka. Fandraisana andraikitra, raha toa misy ny fitongilanan’ny Fitsarana.
Fanorenana tsy ara-dalàna : « Tsy misy indrafo ny fandrodanana »
Raha toa ka efa nampilaza mialoha ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) tamin’ny alalan’ny didy hitsivolana ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany, ary ny Fampitaovana (M2PATE) amin’ny fampitsaharana ...Tohiny
Hetsiky ny mpitondra fivavahana : Ambodia mitafy hodi-janak’ondry !